Sea Pottery: Torolàlana feno sy fanangonana manokana - Ikkaro
firosoana >> toetra >> Sea Pottery
Tsy lohahevitra resahina loatra io ary zara raha mahita fampahalalana amin'ny Internet. Eny misy sanda azo vidiana amin'ny tranokala toa an'i Etsy na eBay, saingy tsy maro ny olona mampiseho ny fanangonana azy ireo na ny fikasana hanasokajiana na hanara-penitra azy ireo.
Gaga aho fa avy amin'ireo sombin-tanimanga kely ireo dia afaka mahita ilay zavatra tany am-boalohany fananana izy ary mampiasa azy io ho fitaovana arkeolojika mandraka androany ary mahatakatra tsara kokoa ny tantaran'ny famokarana eo an-toerana. Miresaka momba ny fifandraisana manokana amin'ireo sombin-javatra hita ao izy ireo ireo farihy lehibe. Eto Espana, ary indrindra ny faritra misy ahy, manakaiky ireo mpanamboatra lehibe indrindra eto an-tany amin'ity karazana fitaovana ity dia heveriko fa tsy ho tsotra loatra ny famantarana ireo zavatra taloha.
Fanasokajiana sy karazany
Ao amin'ny Sea Glass Association dia miresaka momba ny fanasokajiana azy ireo izy ireo arakaraka ny hakitroky sy ny hafanan'ny tifitra tanimanga:
Crockery. Ny mari-pana ambany fitifirana izay miteraka porous sy fitaovana tsy matevina.
Stoneware. Temperatura mahandro avo lenta. Fitaovana tsy misy porosy, manify ary matevina fa tsy vitreous toy ny porselana
Porcelain. Temperatura mahandro be. Tena mafy sy mahavariana, miloko fotsy.
Amin'ny fananana sary, lamina sy loko isan-karazany, sanganasa tena mahafinaritra sy mahaliana no tavela miaraka amin'ny sisiny boribory sy seramika vita.
Nanomboka fanangonana kely aho satria mino aho fa afaka mahazo sombin-javatra mahaliana sy fanangonana hatsarana tena tsara.
Mamela sarin'ireo sombin-javatra hita hatreto aho
Manam-bintana aho mipetraka eo akaikin'ny telozoro vita amin'ny taila ary tsy haiko raha misy fiovana raha mahita sombin-dranomasina "ampy" aho, nefa tsy mankany amin'ireo toerana mafana izay azoko antoka fa hisy mihoatra ny mahazatra.
Tsy sombin-javatra lehibe izy ireo, ary tsy mbola naka sary tsara indrindra (mbola) saingy rehefa mandeha ny fotoana dia azoko antoka fa misy zavatra tsara lavitra azo tratrarina. Ny tanjoko amin'ity fanangonana ity dia ny hahazo zavatra tsara tarehy. Fomba iray hanakaikezana ny kanto. Tsy misy zavatra hafa.
Tsy hita ireo sombin-kazo porcelana, ireo fotsy izay hitanao amin'ny sary iraisana satria may izy ireo ary tsy misy hita eo amin'ny sary. Hanomana boaty kely malefaka aho hanana sary tsara.
Ao amin'ny Fikambanan-dranomasina afaka manome santionany tsara dia tsara isika.
Toro lalana Ikkaro ranomasina
1 Fanasokajiana sy karazany
2 Ny fanangonako
3 Loharano sy loharano